Isbedelkii nidaamka isdhexgalka waa fashilmay | Somaliska
Isbedelkii cusbaa ee lagu sameeyay nidaamka soo dhaweynta dadka ku cusub Sweden bishii December 2010 ayaa lagu tilmaamay in uu fashil ku yimid. Cilmi baaris uu sameeyay urur lagu magacaabo Fores ayaa lagu soo bandhigay in nidaamka cusub uu fashil ku yimid oo uu dhaliyay natiijo ka soo horjeeda midii loogu tala galay. Isbedelkaas oo lagu sheegay kii ugu weynaa ee nidaamka isdhexgalka lagu sameeyo mudo 25 sano ah, ayaa masuuliyadii soo dhaweynta dadka soo galootiga ah looga wareejiyay kamuunada iyadoo lagu wareejiyay laanta shaqaaleynta (Arbetsförmedligen). Iyadoo lagu sheegay ujeedada in la fududeynayo sidii ay dadka cusub shaqo deg deg ah ku heli lahaayeen balse warbixinta Fores ayaa soo bandhigtay in tani ay dhalisay in dadka cusub ay iska fadhiyaan oo xitaa dadkii hore ee ku jiray Kamuunada ay ka fursado shaqo fiicanyihiin dadka cusub. Nidaamkii hore ayaa lagu eedeeyay in uu ahaa mid culus oo aan si deg deg ah u shaqeyneyn iyadoo ay ku qaadaneysay isku celcelis qofka soo galootiga ah mudo 7 sano ah in uu shaqo ku helo. Warbixinta Fores ayaa looga digay haddii aan wax laga qaban nidaamka cusub in ay qaadan karto ka badan 7 sano. Cilmi baarista ayaa lagu sheegay in praktiga iyo koorsooyinka xirfadaha ay ugu fiicanyihiin nidaamka ay dadka soo galootiga ahi shaqo ku heli karaan. Ka dib markii masuuliyada laga qaaday Kamuunada ayaa warbixinta lagu sheegay in laga yareeyay lacagtii taageerada ahayd ee dowladu ay ku siin jirtay mashaariicda soo galootiga, taasoo dhalisay in kamuuno badan ay iska dhaafaan mashaariic muhiim ah. Kamuunada qaarkood ayaa la sheegay in dadka soo galootiga ahi ay hada maalinta oo dhan iska fadhiyaan iskuulada. Warbixinta ayaa lagu dhaliilay koorsada SFI-ga iyadoo lagu sheegay in waqtiga sugitaanka uu wali dheeryahay, halka isbedelka cusub ay ka mid ahayd in SFI-ga sida ugu dhaqsiyaha badan dadka ay u bilaabeen balse taas ayaan wali dhicin. Warbixinta ayaa ku talisay in SFI-ga laga wareejiyo kamuunada oo loo dhiibo cid kale oo awood u leh in ay si hufan hawsha u wado . Waxaa kale oo warbixinta lagu dhaliilay in dadka cusub ay waqti dheer ku qaadato in ay helaan Afarta Nambar oo waqtigii hore fududaan jirtay. Isku soo wada duuboo, ma ahan warbixinta Fores oo keliya dhaliisha loo jeedinayo Nidaamka cusub ee isdhexgalka balse xitaa anaga Somaliska.com ayaa waxaa na soo gaaray cabashooyin ka dhan ah nidaamkaan oo ay soo gudbinayaan dadka Soomaalida ah ee ku biiray. Cabashooyinkaas waxaa ka mid ah nidaamka lacagta iyo qaadashadeeda oo ay ka dhib yartahay midii ay bixin jireen kamuunada. DN.se
Isbedelkii cusbaa ee lagu sameeyay nidaamka soo dhaweynta dadka ku cusub Sweden bishii December 2010 ayaa lagu tilmaamay in uu fashil ku yimid. Cilmi baaris uu sameeyay urur lagu magacaabo Fores ayaa lagu soo bandhigay in nidaamka cusub uu fashil ku yimid oo uu dhaliyay natiijo ka soo horjeeda midii loogu tala galay.
Isbedelkaas oo lagu sheegay kii ugu weynaa ee nidaamka isdhexgalka lagu sameeyo mudo 25 sano ah, ayaa masuuliyadii soo dhaweynta dadka soo galootiga ah looga wareejiyay kamuunada iyadoo lagu wareejiyay laanta shaqaaleynta (Arbetsförmedligen). Iyadoo lagu sheegay ujeedada in la fududeynayo sidii ay dadka cusub shaqo deg deg ah ku heli lahaayeen balse warbixinta Fores ayaa soo bandhigtay in tani ay dhalisay in dadka cusub ay iska fadhiyaan oo xitaa dadkii hore ee ku jiray Kamuunada ay ka fursado shaqo fiicanyihiin dadka cusub.
Nidaamkii hore ayaa lagu eedeeyay in uu ahaa mid culus oo aan si deg deg ah u shaqeyneyn iyadoo ay ku qaadaneysay isku celcelis qofka soo galootiga ah mudo 7 sano ah in uu shaqo ku helo. Warbixinta Fores ayaa looga digay haddii aan wax laga qaban nidaamka cusub in ay qaadan karto ka badan 7 sano. Cilmi baarista ayaa lagu sheegay in praktiga iyo koorsooyinka xirfadaha ay ugu fiicanyihiin nidaamka ay dadka soo galootiga ahi shaqo ku heli karaan.
Ka dib markii masuuliyada laga qaaday Kamuunada ayaa warbixinta lagu sheegay in laga yareeyay lacagtii taageerada ahayd ee dowladu ay ku siin jirtay mashaariicda soo galootiga, taasoo dhalisay in kamuuno badan ay iska dhaafaan mashaariic muhiim ah. Kamuunada qaarkood ayaa la sheegay in dadka soo galootiga ahi ay hada maalinta oo dhan iska fadhiyaan iskuulada.
Warbixinta ayaa lagu dhaliilay koorsada SFI-ga iyadoo lagu sheegay in waqtiga sugitaanka uu wali dheeryahay, halka isbedelka cusub ay ka mid ahayd in SFI-ga sida ugu dhaqsiyaha badan dadka ay u bilaabeen balse taas ayaan wali dhicin. Warbixinta ayaa ku talisay in SFI-ga laga wareejiyo kamuunada oo loo dhiibo cid kale oo awood u leh in ay si hufan hawsha u wado . Waxaa kale oo warbixinta lagu dhaliilay in dadka cusub ay waqti dheer ku qaadato in ay helaan Afarta Nambar oo waqtigii hore fududaan jirtay.
Isku soo wada duuboo, ma ahan warbixinta Fores oo keliya dhaliisha loo jeedinayo Nidaamka cusub ee isdhexgalka balse xitaa anaga Somaliska.com ayaa waxaa na soo gaaray cabashooyin ka dhan ah nidaamkaan oo ay soo gudbinayaan dadka Soomaalida ah ee ku biiray. Cabashooyinkaas waxaa ka mid ah nidaamka lacagta iyo qaadashadeeda oo ay ka dhib yartahay midii ay bixin jireen kamuunada.
Xubin ka mid ah SD oo laga saaray Urur
Xasuusin: Zakat Al-Fitr ha hilmaamin
Ändå nidaamkan cusub aya iladhaama mark aan eego sida ay Kommunadu dadka ugumaysanjireen waayo hada qofku isag iyo xafiiska shaqada looma dhexeeyo , halaka ay kammunku ayay dadaka odhanjiren waxanku ganaxnay 3 bilood oo qofka dhibaato ku ahayd. Xataa xaga dhaqalaha aad ayay AF ku ifiicanyiihiin kummunka qofkastana meeshuu doono ayuu hada uguuri karaa isag oon loogu hanjabin sababteed usoo guurtay iyo maxaa meesha kukeenay.
waxaan salaamaya dhamaan umada somaliyed gar ahan kuwa ku nool wadanka sweden ee webkan ku tixan iyo maamlulka somalika salaan kadib.
waxan kamid ahay dadka nidamkan cusub uu samaaleyey kana cabanayaa dhibaatooyinka faraha oo eey ugu weeyntahay xaga lacagta ayadoo eeysan jirin 1bil alahaba kadhigee in aadan helin lacagtii eey kuusheegeen oo eey ku yirahden wan sineyna.
intaas waxa sii dheer inadan lahayn cid aad lacagtii kaa maqneyd aad uradsato oo ay isku kaa dhiidhiibayaan iyo inadanba laga yabin inad guri qadato oo shirakaduhu kuleyihiin lacagta ad qadato kiraba kaamabixiso marka waxan dhihi lahaa umada somaliyed ee dhibkan ila qabto inan arintan kadhiidhino oo aan dowlada tusino sida uu xaalku yahay walalaha kale ee ayaguna naga soo horeeyey ineey garab nagu siiyeen sidaan arintan cabasho uga gudbin lahayn wsc
SCWW,wad salamantihiin,waxan kamid ahay dadka ay dhib ka hayso nidaamkan cusub waa siduu u sheegay walalkay ku so qortay dhibane hadeer laba bilood lacag mahelin school layma dirin guriga kiradiisa iskaba daa qutul yoomkii ayan la’ahay ememiya aya igu dhacday markan ku qayliyona qoloba qolada kale ayay isku keey dhiiban waa nalagu tuntay,laakin xasbunallahu wanicmal wakiil..